राेचक Archives - Medianp.com
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:२५0
काठमाडौँ । यो संसारमा यस्ता अचम्मका अर्वपति ब्यक्तिहरु पनि रहेका छन् । जसलाई आफ्नो सम्पति कति छ भने थाहा छैन् । उनको नाम एलोन मस्क हो । उनी टेस्ला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००७:२७0
काठमाडौँ । विवाह एक ब्यक्तिको महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि ब्यक्तिले विवाहको फैसला गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नुपर्छ । यदि तपाईको असल ब्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँसिएमा भविष्य एकदमै रोमान्टिक र सुखद हुन्छ । साथै भावनात्मक रुपमा
यो राशीको प्रेमीको लागी विशेष छ डिसेम्बर महिना ,प्रपोज गर्न नगर्नुस् ढिला
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:१८0
काठमाडौँ । कुनै विशेष ब्यक्तिलाई मनको कुरा भन्न मानिसहरुले निकै समय लगाउँछन् । तर आफुले मन परेको मान्छेलाई मनको कुरा गर्ने सोच सबैमा हुन्छ । यद्यपि यो समस्या बृश्चिक राशी भएकाहरुमा पनि हुन्छ । त्यसोभए
काठमाडौँ । सबैलाई थाहा छ , विश्वकै जुनसुकै देशमा पनि काम गरेमात्र तलब पाइन्छ । जुन क्षमता र स्तर अनुहार गर्ने कामहरु चाहि फरक फरक हुन्छ । तर विश्वकै जुनसुकै कुनामा पनि सुते वा अल्छी
महिलाहरुको लागी यी ५ गुण भएको पुरुष हुन्छन् निकै असल , साथी बनाइहाल्नुस् !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:३७0
काठमाडौँ । हामी दैनिक कोही न कोही नयाँ मानिसहरुसँग भेट्छौँ । त्यसमध्ये कोही एकछिनमै साथी बन्छन् भने कोही शत्रु बन्छन् । तर जीवनको कुनै मोडमा भेटिएका साथी कोही केही समयका लागी मात्र साथी भएपनि ,कोही
प्रेम सम्बन्धमा हुँदा भुलेर पनि नगर्नुस् यी ५ गल्ती
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:२६0
काठमाडौँ । प्रविधी र विज्ञानको विकाससँगै अहिलेको युवायुवतीमा प्रेमसम्बन्ध एक सामान्य कुरा भएको छ । जुन कहिले जुट्छ र कहिले छुट्छ थाहा हुदैन । तर यसरी जीवन चल्दैन् । यदि तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई साच्चै नै
प्रेम सम्बन्धमा यो एक शब्दको प्रयोग गर्नुस् , जसले तपाईको सम्बन्ध बनाउनेछ एकदमै राम्रो
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:२४0
काठमाडौँ । अहिले प्रविधि र विज्ञानको विकाससँगै प्रेम सम्बन्ध भन्ने कुरा सामान्य भएको छ । अझ भन्नुपर्दा प्रविधिको गलत प्रयोगले प्रेम र विश्वास हराउदै गएको छ । तपाईले देख्नु वा सुन्नु भएको छ ,विवाह गरेको
काठमाडौँ । तपाई जतिसुकै स्वास्थ्य रहनुस् वा लामो समय बाच्ने प्रयास गर्नुस् तर एकदिन मर्नैपर्छ । त्यसर्थ फेरी मर्नु पर्छ भन्दैमा जे पायो त्यही खाने ,जे मन लाग्यो त्यही पनि गर्नु हुदैन् । यो संसारमा
अनौठो सम्मान ! कम्पनीमा अत्यधिक मेहनत गर्ने कर्मचारीलाई खुट्टा धोएर मालिकले दिए धन्यवाद
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:२८0
काठमाडौँ । तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ , मालिकले कम्पनीमा धेरै मिहेनत गर्ने कर्मचारीलाई खुट्टा धोएर सम्मान गरे भन्ने कुरा । किनभने हामीले सुने देखेअनुसार उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक तथा अन्य विभिन्न सम्मान गर्ने गरिन्छ
यी ५ बानी भएका पार्टनरसँग भुलेर पनि प्रेम नगर्नुस् , धोका हुनसक्छ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:५७0
काठमाडौँ । प्रेम सम्बन्धमा सबैभन्दा ठुलो कुरा बिश्वास नै हो । यदि प्रेममा एक अर्कासँग विश्वास भएन भने त्यो सम्बन्ध लामो समयसम्म रहन सक्दैन् ।जहाँ धेरै शंका हुन्छ ,त्यहाँ सबैभन्दा धेरै झगडा निम्तन सक्छ ।